Mallattoowwan Lakqurxaawaa Fayyadamuu
Mallattoowwan Lakqurxaawaan Fayyadamuu
Ragaalee ke Taaliguu
Ragaa hundee haaraa ke alaagitii, achii ragicha filiitii gulaali. Yoo xiqqaate gahinsa saphaphuu fi ergaa akka amanamu ragaa hundee dandeessisi. Kuni ragichi galmeewwan ke mallateessuu akka danda'an mirkaneessa.Karaa walfakkatuun ragaa gidduugaleessa kamiyyuu gulaaluu ni dandeessa, garuu galmeewwan galmeessuuf barbaachisaa miti.
Yommuu ragaalee haaraa gulaalaa jirtu, LibreOffice irra deebii jalqabsiisi.
Sanduuqni ergaa akka galmicha ol keessuuf si gorsa. Faayilicha ol kaa'uufEeyyee cuqaasi.
Erga olkeessee booda, qaaqa Mallattoowwan Lakqurxaawaa ni argita. Galmichatti furtuu uummataa ida'uuf Ida'i cuqaasi.
Maakroota galmee keessaa mallatteessuu
Barsiisaan, maakrootni kutaa galmeeti. Yoo galmee mallatteesite,maakrootni galmee keessaa ofumaan mallatteeffamu. Yoo galmicha osoo hin tahiin maakroota qofa mallatteessuu barbaadde,akka armaan gadiitti darbi:
Meeshaalee - Maakroota - Mallattoo Lakqurxaawaa fili.
Akka olitti galmeewwaniif ibsametti mallatticha fayyadami.
Waa'ee mallattoowwan lakqurxaawaan
Title is: Mallattoowwan Lakqurxaawaa Fayyadamuu